တရုတ်သံမဏိကေဘယ်ကြိုးလှုံတံစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်း | Gepair ကွက်
သံမဏိ cable ကိုလှံတံကိုယက်ကွက်
သံမဏိကေဘယ်ကြိုးလှိုင်းတံပိုးကိုဘား (သို့) သတ္တုကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဒေါင်လိုက်သတ္တုပြားမှ ဖြတ်၍ ဖြတ်သန်းသွားသောသတ္တုစပ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အသုံးပြုသောပစ္စည်းများတွင်သံမဏိနှင့်ခွန်အားမြင့်မားသောသံချေးမခံသောခရိုမီယမ်သံမဏိများပါဝင်သည်။
ယက်ဝါယာကြိုး drapery သတ္တုကုလားကာမျက်နှာစာသင်၏မျက်စိကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့်, ဗိသုကာအလှဆင်များအတွက်ခြွင်းချက်ဒြပ်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးလက်မှုပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ထူးခြားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်သတ္တုလိုင်းများတောက်ပပြီးပြတိုက်များ၊ ပြခန်းခန်းမများနှင့်အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလှဆင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကနှစ်သက်သည်။
cable ကိုအသံ: 0.5--80.0mm ။
လှံတံ Dia: 0.45--4.0mm
Surface Treatment: သတ္တုမူလအရောင်၊ Plating Titanium Gold, Silver ။
ဖောက်သည် ၈၅% သည် Metal Original color ကိုရွေးချယ်သည်။
ဖောက်သည် ၁၅% သည်အခြားသူများကိုရွေးချယ်သည်။
သံမဏိ Cable ကိုလှံတံယက်ကွက်လျှောက်လွှာ
လှည်းတန်းများနှင့်လေဆိပ်ဝင်ပေါက်ဘူတာများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ကဖေးများ၊ ပြတိုက်များ၊ အော်ပရာဇာတ်ရုံများ၊ ဖျော်ဖြေရေးခန်းမများ၊ ရုံးခန်းများ၊ ပြခန်းများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်အဆောက်အ ဦး များတွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ အခြားနေရာများ။
Cable Rod Woven Mesh ကိုဘယ်လိုစုံစမ်းမလဲ။
ပစ္စည်း၊ cable အချင်း၊ cable pitch, rod အချင်း၊ rod pitch နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုရန်ပမာဏတို့ကိုသင်လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်အထူးလိုအပ်ချက်ရှိမရှိကိုလည်းသင်ဖော်ပြနိုင်သည်။ သင်၏မေးမြန်းချက်ကိုရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်ကိုးကားစာရင်းကိုပေးပါမည်။
2. သင်အလှဆင်ကွက်နမူနာပေးနိုင်မလား? နမူနာသည်မည်မျှကြာအောင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သနည်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နမူနာယူနိုင်ပါတယ်။ နမူနာထုတ်လုပ်ချိန်က ၅ မှ ၇ ရက်။
၃။ Cable Rod Woven Mesh ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ဟုတ်တယ်၊ သင့်မှာ Cable Rod Woven Mesh ကို install လုပ်ရန်သင့်အားကူညီရန်ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများရှိသည်။ ပြီးတော့သင်တပ်ဆင်ရာတွင်သင်၌ရှိသောမည်သည့်ပြsolveနာကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: သတ္တုကွိုင် drapery